Ku habeynta kombiyuutarka gudaha ah gelitaanka dibedda | Martech Zone
Dejinta PC Gudaha ah ee Helitaanka Dibadda
Monday, July 7, 2008 Jimco, Janaayo 11, 2013 Douglas Karr
Marka la korsado darbiyada iyo router-yada, ku xirnaanshaha kombiyuutar kale adigoo adeegsanaya internetka waxay noqotay caqabad dhab ah. Haddii aad jeclaan lahayd inaad kombuyuutarkaaga u qaabeyso si gelitaanka dibedda ay suurogal u tahay, waxaa jira isbeddelo qoto dheer oo qaabeynta ah oo aad u baahan tahay inaad ku sameyso shabakaddaada.
Hel cinwaankaaga IP-ga ama Cinwaanka DynDns
Tallaabada ugu horreysa ee laguu heli karo waa inaad hesho cinwaankaaga. Dunida internetka, tan waxaa loo yaqaanaa IP Address oo si fudud ayaa loola socon karaa.
Raadi inaad leedahay cinwaan IP ah oo aan caadi ahayn (aan isbeddel lahayn) ama cinwaan IP ah oo Dynamic (beddelaya). Fursadaha ayaa ah haddii aad tahay DSL ama xitaa DSL Pro inaad haysato cinwaan IP firfircoon. Haddii aad ku jirto DSL Ganacsi ama Cable Modem, waxaad u badan tahay inaad taagan tahay.
Kani waa cinwaanka IP ee loo qoondeeyay barta aad ka soo gasho shabakaddaada. Haddii aad tahay qof taagan, wax walwal ah ma jiraan. Haddii aad tahay Dynamic, iska qor adeeg sida DNS firfircoon. Inta badan router-yada casriga ahi waxay leeyihiin awood ay kula xiriiraan DynDNS si ay u cusbooneysiiyaan cinwaankaaga IP-ga. Kadib, halkii aad qof ka siin lahayd cinwaankaaga IP, waxaad siin lahayd degmo sida Findme.homeip.net.
Haddii aadan aqoon IP-gaaga dibedda, waxaad isticmaali kartaa degel sida Waa maxay Cinwaankeyga IP-ga si loo ogaado.
Ping-kaaga DynDns-kaaga ama cinwaanka IP-gaaga oo fiiri haddii aad jawaab hesho
Haddii aadan helin wax jawaab ah, waxaad u baahan kartaa inaad ku xoojiso Pinging qaabka router-kaaga. Tixraac dukumiintiyada router-kaaga.
Ku sahlo gudbinta PORT-ka router-kaaga
Hadda oo aan helnay cinwaankaaga, waa muhiim in la ogaado waxa albaabka inaad gasho guriga iyada oo loo marayo. Tan waxaa loo yaqaan PORT-ka kombiyuutarka. Barnaamijyada kaladuwan waxay adeegsadaan PORT-yo kala duwan, markaa waa muhiim inaan leenahay PORT sax ah oo loo furay loona rogay kombuyuutarkaaga. Sida caadiga ah, inta badan router-yada ayaa leh dhammaan dekeddaha waa la xiray sidaa darteed qofna ma geli karo shabakaddaada.
Si PC-ga isha uu ula xiriiro PC-ga loo socdo, Ruter-kaaga wuxuu u baahan yahay inuu taraafikada taraafikada kombuyuutarkaaga.
Waxaan ka hadalnay muhiimadda cinwaanka IP-ga ah ee shabakaddaada, hadda waxaa muhiim ah inaad leedahay cinwaan IP-ga ah oo loogu talagalay kombuyuutarkaaga Shabakadda Gudaha. Tixraac dukumiintigaaga router ee ku saabsan sida loo qaabeeyo Cinwaanka IP-ga ee kombuyuutarkaaga gudaha.
Waxay kuxirantahay nooca dalabka aad rabto inaad kudhex xirnaato, waa inaad awood u siisaa inaad u gudbiso PORT-ka Router-kaaga una gudbiso PC-gaaga cinwaanka IP-ga ah.
HTTP - haddii aad rabto inaad ka maamusho server-ka kombiyuutarkaaga gudaha oo aad ka dhigto mid dibadda laga heli karo, PORT 80 waxay u baahan doontaa in loo soo gudbiyo.
PCAnywhere - 5631 iyo 5632 waxay u baahan doonaan in loo gudbiyo.
VNC - 5900 waxay ubaahantahay in lasoo gudbiyo (ama hadaad deked kale sameysay, ka faaideyso midkaas).
Daar Dejinta Firewall-ka kombuyuutarkaaga
Isla PORTS-ka aad u gudbisay PC-gaaga ayaa u baahan doona awood u siinta barnaamijkaaga Firewall-ka PC-ga. Tixraac dukumiintigaaga gidaar-galeedka ah iyo sida loo suurtageliyo arjiga iyo / ama dekedaha aad rabto inaad ka hesho dibedda.
Samaynta isbeddellada qaabeynta ma sahlana, laakiin mar alla markii ay si fiican u shaqeyneyso waa inaad awood u yeelatid inaad ku hesho kombuyutarkaaga adoo adeegsanaya arjiga aad ka dooraneyso meel kasta oo aad rabto.
FIIRO GAAR AH: Iyadoo aan loo eegin barnaamij kasta oo aad isticmaaleyso, hubi inaad dalbato username aad u adag iyo lambarka sirta ah! Burcadda waxay jabsadaan shabakadaha iyagoo raadinaya dekado furan si ay u eegaan inay heli karaan iyo / ama amar ku bixin karaan kombiyuutaradaas. Intaa waxaa sii dheer, waxaad sidoo kale xaddidi kartaa cinwaanada IP-ga ee aad siin doontid marin-u-helkooda.